Home Wararka Tabid Cabdi oo bixiya dhaqaalaha ku baxa Shiikh Soomow, halkee laga keenay...
Tabid Cabdi oo bixiya dhaqaalaha ku baxa Shiikh Soomow, halkee laga keenay lacagtaas?
Gudoomiyhii hore ee Gobolka Banaadir mudane Taabid Cabdi Maxamed oo horay looga ceyriyay mas’uuliyadii uu u hayay dowlada Fedaraalka, ayaa waxa uu dhaqaale ku bixiyaa dhaq-dhaqaaqa iyo nolosha Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abuukar (Sheekh Soomow).
Shiikh Soonow ayaa dhawaan mar uu la hadlayay culumo xirtiisa ka tirsan ka horsheegay in uusan lacag ka qaadanin dowlada Fedaraalka, hotelka uu degan yahay iyo gawaariga uu wato ay bixiso dad kale oo aan ahaynin dowlada Fedaraalka.
Sida MOL u xaqiijiyeen ilo xog-ogaal ah oo ku dhow Tabid iyo Shiikh Soonow, dhamaan lacagta ku baxda Shiikh Soomow ee dhanka noloshiisa iyo gawaarida uu ku socdo waxaa bixiyo Tabid Cabdi Maxamed.
Shiikh Somoow ayaan dhankiisa qarin in uu lacag uu ka helo Tabid isaga oo u sheegay saaxibadiisa ku dhow –dhow in dhaqaalaha ku baxo oo uu uga maarmay dowlada Fedaraalma ka helo Taabid.
“.. aniga waan ogahay, in Taabid markii uu Xamar yimid uusan shilin haysanin, iska daa in qof kaalmeeyee isagaa kaalmo u baahnaa…. aniga aad i arkayso aa nikaaxiyay guurkiisii ugu danbeeyay, wax badan ayaa ogahay… Xamarna waa wada dhago maqal leh, laakiin waqtigaan xaadirka ah Kheyre alaha siiyee meel fiican ayuu iiga soo baxay, lacag kastaa oo lagula dagalaayo dowladaan ictisaamka ah waa xalaal” , ayuu yiri Shiikh Soomow oo la hadlayay qaar ka mida xirtiisa.
Horaantii sanadkaan ayaa ahayd markii maxkamad la horgeeyay dacwadii ka dhalatay guryo “apartments” uu Taabid ka iibsaday magalaada Nairobi. Dacwada ayaa la xiriirtay milkiilaha rasmiga ah ee uu Taabid ka iibsaday guryaha iyo dhulkaas. Dad badan ayaa isweydiinaya sida ay suuragal ku tahay in Taabid mudo dhowr bilood gudahood ah uu ku iibsado magalaada Nairobo guryo qiimahooda gaaraya Malaayiin Doolar iyada oo la ogyahay noloshiisa dhaqaale.
Dowlada Farmaajo ayaa horay ugu eedeysay Taabid in intii uu joogay Gobolka Banaadir uu ka dhacay qasnada Gobolka Banadir lacago fara badan, oo ilaa iyo hadda la isku haysto.